360 CCTV Camera အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
? 163eye p2p ip camera?
Wireless IP Camera များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ထို Wireless IP camera လေးတွေဟာဆိုရင် အင်တာနက်ရှိသည့် မည်သည့် wireless device နှင့်မဆို ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် အထက်အောက်ဘယ်ညာလိုသလို ဖုန်းကနေတဆင့်360ံဒီဂရီ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်မှ အသံ ကိုပြန်ကြားနိုင်ပါသည်။
Memory မှတ်သားရန် Micro SD 64 GB အထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး အရုပ်ရော အသံရော Record လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
ရုပ်ထွက်အနေဖြင့် HD Resolution အထိကြည်လင်ပြတ်သားမှု ရှိပြီး Lens size 3.6mm HD မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
လုံခြုံရေးအတွက် အိမ် ဆိုင် ကျောင်း ရုံးခန်း ဧည့်ခန်း ဂိုဒေါင်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Android, iOS နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Power ပေးရန် အခက်အခဲရှိသည့်နေရာများတွင် Power Bank ဖြင့်လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
163EyeIsafree app, developed specially for P2P camera supporting software, the software can achieve real-time viewing, receiving alarm information, remote control, video playback and other utility functions, for home security addaguarantee.
တခြား လုံခြုံရေး ပစ္စည် များ ကြည့်ရန်
အမည်: 360 CCTV Camera